Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0512 tal
Lesona 05 : Ny ohatra nasehon'ny Apostoly
28 Jolay - 03 Aogositra 2012
Mitady ny fankasitrahan'Andriamanitra (1Tes2:4,6)
Talata 31 Jolay
Vakio ny 1 Tes. 2:4-6. Farito ny fifanoherana misy eo amin’ny antony manosika an’i Paoly hanao ny asa fitoriana sy ireo antony lazainy fa manosika izao tontolo izao hanao zavatra. Nahoana no tsy mora mandrakariva ny mahita izany fahasamihafana izany; izany hoe, ahoana no mahatonga ny olona hamita-tena mikasika ny fahadiovan’ny antony mahatonga azy ireo hanao zavatra? Nahoana no mora tokoa ny manao izany?
Ilay teny adika matetika amin’ny hoe “ankasitrahana” (1 Tes. 2:4), dia mampiseho ny fisian’ny fizahan-toetra na fandinihana. Navelan’ny apôstôly hizaha toetra ny fahatokian’ny fiainan’izy ireo sy ny fikasany Andriamanitra. Ny tanjon’izany fizahantoetra izany dia ny mba hahazoana antoka fa ny filazantsara izay toriny dia tsy mifanipaka amin’ny fomba fiainany.
Nanoratra mikasika ny maha-zava-dehibe ny fandinihan-tena ireo olon-kendry mamim-bahoaka tamin’izany fotoana izany. Raha maniry hanova izao tontolo izao ianao, hoy ny fampianaran’izy ireo, dia mila mandinika mandrakariva ny fikasanao sy ny antony manosika anao hanao zavatra. Entin’i Paoly lavidavitra kokoa io foto-kevitra io. Ankoatra ny fandinihany ny tenany mantsy, dia dinihin’Andriamanitra ihany koa izy. Nohamarinin’Andriamanitra raha mifanaraka tsara amin’ny fomba fiainany anaty ny zavatra torin’i Paoly na tsia. Raha ny marina, dia Andriamanitra irery ihany no mendrika handraisana ny fankasitrahana.
Ilain’ny olombelona eo amin’ny fihetsiketsehany rehetra ny fahatsapana ho manana tombambidy. Matetika isika no mitady izany tombambidy izany amin’ny alalan’ny fanangonana harena, ny fahombiazana na ny fideran’ny hafa antsika. Marefo sady tsy maharitra akory anefa ireo loharano rehetra ahazoana tombambidy ireo. Amin’ny alalan’ny filazantsara ihany no ahazoana ny tombambidy tena izy sady maharitra. Rehefa tena takatsika amin’ny fahafenoany fa maty ho antsika i Kristy, dia manomboka tsapantsika ny tombambidintsika, izay tsy azon’ny zavatra eo amin’izao tontolo izao hozongozonina.
Inona no anampian’ny 1 Tes. 2:5,6 an’ireo antony telo voatanisa ao amin’ny and. 3?
Ny fandroboana dia miainga avy amin’ny faniriana hahafaly ny olona anankiray, kanefa tsy dia miorina amin’izay loatra ny fitoriana ny filazantsara. Tsy izay eritreretin’ny olona momba azy velively no antony nanosika an’i Paoly hanao ny asany. Asongadiny ihany koa ny antony anankiray hafa araka ny fisainan’izao tontolo izao, dia ny vola. Mazàna ny olona izay nahazo fitahiana avy tamin’ny asa nataon’ny olona iray taminy, dia mazoto manolotra vola ho an’izany asa izany na mividy ny vokatra avy aminy. Mety ho fakam-panahy ho an’ny mpiasan’Andriamanitra izany ka mahatonga azy ireo tsy hifantoka amin’ilay hany antony tena lehibe indrindra, dia ny fahazoana sitraka avy amin’Andriamanitra.
Inona no zavatra ankasitrahan’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao, ary inona no antony? Inona kosa no tsy ankasitrahany, ary inona koa no anton’izany?